Na nisy aza ny fihaonana tamin’ny praiminisitra : mbola mitohy ny fampikatsoan’ny mpitsara ny fitsarana | NewsMada
Na nisy aza ny fihaonana tamin’ny praiminisitra : mbola mitohy ny fampikatsoan’ny mpitsara ny fitsarana
Efa niitatra ny raharaha vao niroso amin’ny fandraisana andraikitra ? Noraisin’ny Praiminisitra Mahafaly Solonandrasana, teny Mahazoarivo, ireo solontena avy amin’ny Sendikàn’ny mpitsara (SMM), omaly. Tsy mbola tena mivaha ny olana.
Naharitra ora roa be izao, nikato-trano, saingy tsy nanakana ny fitohizan’ny fitokonana izany. « Nivoitra tamin’ny fihaonana ny hananganana ny komitin’ny telo tonga, ahitana ny mpitsara sy ny eo anivon’ny primatiora ary ny avy amin’ny minisiteran’ny Fitsarana. Handinika ny fitakian’ny SMM izy ireo ka hijery ny azo tanterahina sy ny tsy ho vita. Kely ny “gateaux” (vola) nefa fitakiana betsaka ka tsy maintsy tsinjaraina izany », hoy ny lehiben’ny governemanta teny Ivandry, omaly. Nambarany fa tokony samy handray andraikitra ny rehetra satria tsy azo atao takalon’aina ny vahoaka. « Entanina hampitsahatra ny fitokonana ny rehetra fa hovahana amin’ny alalan’io komity io ny olana », hoy ihany izy. Notsiahiviny fa olana efa hatramin’ny ela ny eo anivon’ny fitsarana ka tokony samy ho resy lahatra ny rehetra. « Ezahina ny tsy hisian’ny kolikoly ary samy hanara-maso izany ny mpiasam-panjakana… Mihaino hatrany ny fitondrana ary mamaha olana », hoy izy.
Etsy andaniny anefa, nanitrikitrika ny SMM fa tokony handray fepetra ny fitondrana ny amin’ny hampiharana ireo didim-pitsarana rehetra tsy notanterahina sy tsy nampiharina. Tsy levon’ny vavon’izy ireo koa anefa ny fivoizana hevitra hafahafa mandeha any, ataon’ny olona sasany. “ Tohina tanteraka izahay amin’ny filazana fa manozongozona fitondrana. Ny ataon’izy ireo anefa no tena manozongozona amin’ny tsy fanajana lalàna sy ny tsimatimanota… Fanafenana ny tsy mety eto amin’ny firenena mba hivilian’ny sain’ olona tsy hijery ity raharaha ity izany. Antom-pijoroanay sy ny tolona atao ny fijerena ny tombontsoan’ny firenena sy ny vahoaka. Mampitandrina koa izahay fa misy mpikarama an’ady ampitenenina any ho any manala baraka…”, hoy ny filoha lefitry ny SMM, Jaona Clement.
Hanao tatitra amin’ny mpikambana rehetra
Mbola hanao tatitra eo anivon’ny mpikambana rehetra amin’ny alalan’ny fivoriambe ny birao, taorian’ny fihaonana tamin’ny mpitondra vao afaka maka fanapahan-kevitra amin’ny tokony hatao indray. Hitohy kosa anefa ny fitokonana hatramin’ny alatsinainy ho avy izao, fe-potoana efa nambaran’izy ireo tany aloha.
Tsiahivina fa andro fahefatra amin’ny fitokonan’ny mpitsara ny omaly. Nanao hetsika nanoloana ny fitsarana izy ireo ary nikatona tanteraka sy nikatso ny raharaham-pitsarana. Tahaka izany koa ny tany Antsirabe. Na izany aza, tsy maintsy notsaraina ny raharaha heloka bevava ho an’ny fitsarana tany Ambatondrazaka, mba hitandroana ny filaminana sy fandriampahalemana, araka ny nambaran’ny mpitsara any an-toerana.
Randria sy Rarivo